Banyere Sino igwe anaghị agba nchara - Huaxiao Metal Corporation Limited
Sino igwe anaghị agba nchara Corporation Limited na-nyekwara site Huaxia mba Steel Corporation limted. Sino igwe anaghị agba nchara bụ ọkachamara emeputa na ekspootu nke na-enwe nchegbu na mmepe na mmepụta nke igwe anaghị agba nchara, aluminium, carbon ígwè, Gi, PPGI, na ọjà, mmanya, fastener, na ndị ọzọ na metal akụkụ. Isi anyị na-emi odude ke Shanghai na-adaba adaba njem ohere. Hebei alaka ụlọ ọrụ na-eguzobe na Tangshan obodo. Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa ma nwee ekele dị ukwuu n'ọtụtụ ahịa dị iche iche n'ụwa niile.
Na-ekpuchi mpaghara nke square mita 4,000, anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 15 otu ọrụ maka azụmahịa mbupụ, ọnụ ọgụgụ ahịa kwa afọ nke karịrị USD 80Milllon na 2018, ngụkọta karịa 40,000 metric ton metal ngwaahịa na-ebupụ, ma na-ebupụ 100% nke mmepụta anyị n'ụwa niile.
Anyị mma-onwem ụlọ ọrụ na magburu onwe ya mma akara nile nkebi nke mmepụta-enyere anyị aka-ekwe nkwa ngụkọta ahịa afọ ojuju. E wezụga nke ahụ, anyị na ụlọ ọrụ ibe anyị nwetara ISO9001, akwụkwọ TS16949.
Dị ka a n'ihi nke anyị elu àgwà ngwaahịa na pụtara ìhè ahịa ọrụ, anyị nwetara a zuru ụwa ọnụ ahịa netwọk na-eru isi ahịa anyị North America, Central na South America, Europe, Middle East, Asia.
Daalụ maka ikiri gị